विवाह पञ्चमी महोत्सवमा रमाउँदै जनकपुरधाम
त्रेता युगमा राम र सीताबीच भएको विवाहको सम्झनामा मनाइने विवाह पञ्चमी महोत्सव जनकपुरधाममा प्रारम्भ भएको छ। सात दिने महोत्सवका लागि जनकपुरधाम सजाइएको छ।
योमरी अर्थात् सबैलाई मनपर्ने रोटी
उपत्यकाका नेवार समुदायले यसवर्ष पनि आज बुधबार योमरी पुन्ही मनाइरहेका छन्। हरेक वर्षको मंसिर पूर्णिमा अर्थात् धान्य पूर्णिमाका दिन नेवार समुदायमा योमरी पुन्ही पर्व मनाइन्छ ।
ग्रामीण क्षेत्रबाट पनि लोप हुँदैछ सामा–चकेवा
तराई मधेशमा कात्तिक शुक्ल पक्षमा किशोरीहरूले मनाउने सामा–चकेवा ग्रामीण क्षेत्रबाट पनि हराउँदै गएको छ। साँझको समयमा हरेक गाउँटोलमा गीत गाउँदै सामा चराउन हिँड्ने किशोरीहरूको दृश्य अब गाउँघरमा पनि दुर्लभ हुँदै गएकोमा संस्कृतिप्रति चासो राख्नेहरू चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्।
मिथिलामा अमलाको फेदमा खाना खाने अक्षय नवमी पर्व मनाइँदै मिथिलाञ्चलमा आज अक्षय नवमी पर्वको रमझम छ। मिथिलामा धातृ नवमी र इच्छा नवमीसमेत भनिने यो पर्व कात्तिक शुक्ल नवमी तिथिमा मनाइन्छ।
उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएपछि सकियो छठ व्रतालुले आज बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएर छठ पर्वको समापन गरेका छन्। मूल विधि चतुर्थीदेखि शुरू भई षष्ठीका दिन बेलुकी अस्ताउन लागेको र सप्तमीका दिन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिई पूजाअर्चना गरी समापन गर्ने परम्परा छ।
स्विमिङ पुलमा छठ [तस्वीरहरू] कोरोना महामारीका कारण सरकारले यसअघिका वर्षहरू जस्तै छठ पर्व मनाउन नदी किनारमा भीडभाड गरेर संक्रमणको जोखिम नबढाउन अनुरोध गरेपछि भक्तजनहरूले स्विमिङ पुलमा गएर समेत अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएका छन्।
आज छठको मुख्य दिन, जलाशय किनारमा ब्रत, पूजा र कीर्तन गरी मनाइँदै सूर्योपासनाको महापर्व छठको मुख्य दिन आज जलाशय किनारमा ब्रत, पूजा र कीर्तन गरी मनाइँदैछ। आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएर रातभर जाग्राम बसी भोलि बिहानको उदाउँदो सूर्यको उपासना गरी अर्घ्य दिएपछि यो पर्व सम्पन्न हुनेछ।
बुधबारदेखि छठपर्व शुरुः उत्साहका साथ तयारी धार्मिक एवं लोकआस्थाको पर्व छठको तयारी उत्साहका साथ शुरु भइसकेको छ। यमपञ्चक पर्व सम्पन्न हुनासाथ मिथिलावासी यतिखेर छठ पर्व मनाउनका लागि आवश्यक सरसामग्रीको किनमेलमा जुटेका छन्।
नेवार समुदायले आज पनि भाइटीका लगाउँदै, रानीपोखरी पनि खुला नेवार समुदायका केही समूहले मंगलबार पनि भाइटीका लगाउँदैछन्। सरकारले नेवार समुदायको भाइटीका (किजापूजा)का लागि मंगलबार पनि देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ। आज बिहान केही समय द्वितीया तिथि रहेकाले नेवार समुदायले भाइटीका लगाउन लागेका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले बहिनी कौशल्याको हातबाट टीका लगाए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहिनी कौशल्या कोइरालाको हातबाट तिहारको टीका लगाएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नै टीका लगाएका हुन्। आफ्ना दाजुलाई टीक लगाउन बहिनी कौशल्या बालुवाटार पुगेकी थिइन्।
खुलामञ्चमै खाना, खुलामञ्चमै भाइटीका बन्दाबन्दीका कारण समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई निःशुल्क खाना खुवाउँदै आएको हाम्रो टीम नेपालले सोमबार भाइटीकाको दिन सर्वसाधारणहरूलाई टीका लगाइदिएको छ।
आज भाइटीका, बिहान ११ः३७ बजे उत्तम साइत यमपञ्चकको पाँचौं दिन आज भाइटीका, दाजुभाइले दिदीबहिनीबाट टीका ग्रहण गर्दैछन्। दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई श्रद्धा र आस्थाका साथ दीर्घायु, आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गर्दै पञ्चरङ्गी वा सप्तरङ्गी टीका लगाई भाइटीका मनाइँदैछ।
शरीरलाई मन्दिर मान्ने म्हः पूजा 'म्हः पूजा' मा आफूलाई पुज्नुको अर्थ सांस्कृतिक औपचारिकता मात्र होइन, स्वास्थ्यप्रतिको सचेतना पनि हो। 'पूजा गर्ने हरेकले पहिले आफ्नो शरीरलाई नै मन्दिर मान्नुपर्छ', नेवार समुदायले मनाउने म्हःपूजाको दर्शन यही हो। तर, आफ्नै शरीर पुज्नेहरूले नै आफ्नै शरीरलाई ध्यान दिएका छौं त?
बालगोपालेश्वर मन्दिर दुई दिन खुला रहने यो वर्षको भाइटीकाका लागि १ र २ मंसिरमा बालगोपालेश्वर मन्दिरमा दर्शनको व्यवस्था मिलाइएको छ। २०७२ सालको भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षति पुर्‍याएको रानीपोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि यो वर्ष भाइटीकाका लागि खुला गरिने भएको हो।
बालगोपालेश्वर मन्दिर बिहान ५ देखि साँझ ५ बजेसम्म खुला रहने काठमाडौं महानरपालिका र राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको सहकार्यमा यस वर्षको भाइटीकाका लागि बिहान ५ देखि साँझ ५ बजेसम्म बालगोपालेश्वरको दर्शन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। भाइटीकाको दिनमा मात्रै खुल्ने रानीपोखरी बीच भागमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर र रानीपोखरीको पनि निर्माणकार्य सम्पन्न भएसँगै पहिलोपटक बिहान ५ देखि साँझ ५ बजेसम्म दर्शनको व्यवस्था गरिएको हो।
तिहारको चौँथो दिन आज गाई र गोरु तिहार, साँझ म्ह पूजा
यमपञ्चक अर्थात् तिहारको चौथो दिन आज गाई र गोरुको पूजा गरेर मनाइँदैछ। नेवार समुदायले आजै साँझ म्ह पूजा गर्दैछन्।
लक्ष्मी पूजाको दिन चन्द्रागिरीबाट देखिएको झिलिमिली काठमाडौं उपत्यका [तस्वीरहरू]
आज तिहारको तेस्रो दिन लक्ष्मी पूजा, घरघरै बत्ति बालेर झिलिमिली पार्दै लक्ष्मी भित्र्याउने दिन। देशकै सबैभन्दा धेरै आवाधी भएको शहर राजधानी काठमाडौं उपत्यका पनि आज बत्तीले झिलिमिली भएको छ।
आज कुकुर तिहार, यसरी मनाइयो काठमाडौंँमा [तस्वीरहरू]
आज कुकुर तिहारका दिन नेपालीहरूले घर आँगनमा कुकुरलाई पूजा गरी मीठामीठा खानेकुरा खुवाउने गर्छन्। आजको दिन कुकुरको पूजा नगरी खाए पाप लाग्‍ने भनाइ पनि छ।
उद्योगी–व्यवसायीको लक्ष्मीपूजा, कसले कसरी गर्दैछन् ? उद्योगी, व्यवसायीले समेत तिहारलाई विशेष रूपमा मनाउने गर्दछन्। खासगरी वर्षभरीको व्यापार, व्यवसाय राम्रो होस् भनेर कामना गर्ने र धनकी देवी भनिने लक्ष्मीको पूजाआजा गर्ने प्रचलन छ। यसवर्षको लक्ष्मीपूजा उद्योगी, व्यवसायीले कसरी गर्दैछन् ? हामीले केही उद्योगी, व्यवसायीलाई सोधेका छौंः
यमपञ्चकको तेस्रो दिन लक्ष्मी पूजा गरिँदै, कुकुर तिहार पनि आजै आज यमपञ्चकको तेस्रो दिन, कार्तिक कृष्ण औँसीको साँझ। ऐश्वर्य, धन धान्य र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको पूजाआराधना गरी लक्ष्मीपूजा मनाइँदैछ। कुकुर तिहार पनि आजै परेकाले बिहान कुकुरको पूजा गरिँदैछ।
मङ्सिरमा भाइटीका लगाउनुहुन्न भन्ने हल्लाका पछि नलाग्न पञ्चाङ्ग समितिको आह्वान नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले १ मङ्सिरमा परेको भाइटीकामा दाजुभाइले दिदीबहिनीको हातबाट टीका लागाउनुहुन्न भन्ने हल्लाका पछि कुनै शास्त्रीय आधार नरहेको जनाएको छ।
तिहारलाई झिलीमिली पार्न पाला बनाउने चटारो [तस्वीरहरू] हिन्दूहरूको दोस्रो ठूलो पर्व तिहार नजिकिँदै गर्दा राजधानीका विभिन्न स्थानमा माटोका भाँडा बनाउने चटारो बढेको छ। विशेष गरी माटोका भाँडा बनाउने प्रजापति समुदायलाई यतिबेला भ्याइनभ्याई हुन्छ।
महामारीको दशैं: घटेको बलि, खुम्चिएको रौनक कोरोना संक्रमण महामारीका कारण स्वास्थ्य सुरक्षा प्राथमिक विषय बनेकाले यस वर्ष बडादशैंका विविध विधि र परम्परा खुम्चिएका छन् भने सर्वसाधारणले पनि रौनक सीमित गरी सावधानी अपनाएर चाड मनाउनुपर्ने परिस्थिति छ।
कोरोना संक्रमण जोखिमलाई बेवास्ता गर्दै रौतहटमा कलशयात्रा दशैंको पूजामा भीडभाड नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको आदेशलाई वेवास्ता गर्दै रौतहटका विभिन्न शक्तिपीठहरूमा सयौँको भीड देखिएको छ।
दशैंघरमा राखियो जमरा, शक्तिपीठमा दर्शनार्थीहरूको भीड (तस्वीरहरू) नवरात्रको पहिलो दिन, शनिबार घटस्थापनाको अवसरमा दशैंघर लगायत दशैं मनाउने सबै नेपालीको घरमा जमरा राखिएको छ भने कोभिड-१९ संक्रमणको जोखिमलाई बेवास्ता गर्दै भक्तालुहरू पूजाआजाका लागि शक्तिपीठ पुगेका छन्।
नवरात्रीमा देशभरका शक्तिपीठ भक्तजनका लागि नखोलिने हिन्दुहरुको महान् चाड बडादशैँका अवसरमा यस वर्ष देशभरका शक्तिपीठ भक्तजनका लागि नखोलिने भएका छन्। ती शक्तिपीठमा नित्य पूजा मात्र हुनेछ।
भाइरसभन्दा भगवान ठूलो ! मार्तडीका स्थानीय धनी कठायत ( ५३) का लागि माडु पूजा आफ्नी आमा र दिदीबहिनी भेट्ने अवसर हो। लाग्छ, लामो समयपछि आफ्ना माइतीसँगको भेट कठायतका लागि विघ्नबाधा र रोगभन्दा प्रिय छ।
वर्णसङ्कर विचारको बिगबिगी सदियौंदेखि निरन्तर मौलिक संस्कृति ऋषिपञ्चमीलाई ‘गुप्ताङ्ग धुने दिवस !’ भन्दै उडाइनु नयाँ बीउ, मल र विषादीले बाली सप्रने व्यापारिक दाबी जस्तै वर्णसङ्कर विचारको दरिद्रता हो ।
सन्तानको दीर्घायुको कामना गर्दै मनाइयो खरजितिया सर्लाही र रौतहटका महिलाहरूले आफ्ना सन्तानको सुखी तथा लामो जीवनको कामना गर्दै खरजितिया पर्व मनाएका छन्। शुक्रबार बिहान घरमै नुहाएर पितृहरुलाई पारिवारिक चलन अनुसारको सामग्री चढाएर खरजितिया पर्व समापन गरिएको छ।